टीका विवाद : राष्ट्रपतिले खोजी गर्दा पत्ता लाग्यो खास कुरो - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दशैको टीकाका विषयमा आलोचना भइरहेको छ । टीका ग्रहण गर्न पुगेका विशिष्ट व्यक्तिहरूले भुईमा टेकेर टीका लगाउनुपरेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको हाे । तर कुर्सी किन र कसरी हट्यो ? भन्ने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयभित्र बहस सुरु भएको छ । पहिलो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपतिका छोरी ज्वाईले टीका लगाउदा कुर्सी थियो पछि कसरी हट्यो ? खोजी गर्दा कुरा पत्ता लागेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोधपुछ गरेपछि सचिवालय र राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाले अचानक कुर्सी हटाएको पत्ता लागेको छ । मन्त्रीहरूले टीका लगाएपछि राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाको टीका लगाउने पालो आएको थियो । त्यही क्रममा सेनाले कुर्सी हटाएको थियो । चेन अफ कमाण्ड अनुसार सेनाले राष्ट्रपतिका अगाडी कुर्सीमा बस्न मिल्दैन भन्दै कुर्सी हटाएको र पछि राख्न बिर्सिएको सेनाले राष्ट्रपतिलाई जवाफ दिएको छ ।
नेपाली सेनाको प्रचलनअुनसार राष्ट्रपतिसँग झुकेर टीका लगाउने परम्परा रहेकाले कुर्सी हटाएको र तत्काल नराख्दा समस्या भएको राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले नेपालपाटीलाई जानकारी दिए । ‘सेनाको परम्परा अनुसार सेना आफैले कुर्सी हटाएको हो, ’ उनले भने, ‘सेनाले टीका लगाउने बेलामा नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आएपछि पालो छोडिदिँदा घुँडा टेकेर टीका लगाउनु परेको हो । ’
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा टीका लगाउन आउनुअघि टीका लगाउने ठाउँमा कुर्सी राखिएको भए पनि थापाले टीका थाप्ने बेलामा भने सैनिकले कुर्सी हटाएका थिए । पाहुनाहरुलाई अप्ठ्यारो परेको विषयमा राष्ट्रपतिले पनि दुःख व्यक्त गरेको उनले बताए । वामदेव गौतम भने स्वइच्छाले घुडा टेकेर बसेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।